ကိုးကားဖော်ပြချက်များ – The Padaythar
သူ့မရဲ့ အဟွာပုံတွေ Like & Share လုပ်သူတွေကို တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့ သင်းသင်း
[Zawgyi] ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…သင်းသင်းဆိုတဲ့မော်ဒယ်မလေးဟာ..ဝေဠုကျော်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြသနာတွေတက်ရင်း…သနားကြတဲ့သူတွေရှိသလို…ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရသူလေးပါ..ဝေဖန်မူတွေတစ်ဖတ်က…သူ့ဘဝလေးမှာတော့ဖြင့် မိသားစုအတွက်..ရသမျှငွေလေးကိုစုရင်းမိခင်ဖြစ်သူ့ကိုလုပ်ကျွေးနေသူလေးပါ…ခုတလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မိမိရဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့်..ဆွေမျိုးတွေခင်ဗျာ..ဖုန်တောင်မကိုင်ရဲ..မကြည့်ရဲ့ကြတော့တဲ့အထိ လောကဒဏ်ကကိုခံစားနေရသူအဖြစ်သူမရဲ့ပရိသတ်တွေက စာနာပေးကြပါတယ်။ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာတော့… ကျမကို ဆူးရှထက် ခင်မာမြင့်တို့နဲ့ မနှိုင်းကြပါနဲ့ရှင် ကျမမိဘကိုလုပ်ကျွေးနေတဲ့ မိကောင်းဖခင်သားသမီးတစ်ယောက်ပါလို့ ..ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ နောက်ထပ်လဲအခုလိုပဲတင်ထားတာတွေကိုလဲတွေ့ရပါတယ် ….တစ်ချိန်ကဆိုပြီး “ယောက်ျားနဲ့ဗိုလ်တထောင်ဘုရားမှာ အမှတ်တရပုံရိပ် ” လို့ Memory တက်လာတာကိုပြန်လည်တင်ထားတာလဲတွေ့ရပါတယ်။
ကိုးကားဖော်ပြချက်များ ဗဟုသုတ လူမှုဘဝ ဆောင်းပါး
သင့်ကလေးဟာ ပါရမီရှင်လားသိနိုင်စေမယ့် လက္ခဏာ၁၀ချက်
[Zawgyi] သင့်ရင်သွေး ဉာဏ်ကောင်းပါသလား? ဒါမှမဟုတ် ဉာဏ်ရည်မြင့်မားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသလား? ကလေးတိုင်းဟာထူးခြားပါတယ် မိဘမှန်ရင် ကိုယ့်သားသမီးကိုယ် ထူးခြားသူများ သူများထက်သာသူများသာ ဖြစ်စေချင်ကြတာချည်းပါပဲ၊ ကလေးတိုင်းက တကယ်လည်း ထူးခြားသာလွန်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ကလေးတွေကတော့ နောင် တစ်ချိန်မှာ အထင်ကရ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီးတွေ ဖြစ်လာဖို့ ပါရမီပါလာကြပါတယ်။ တကယ်လို့
ကိုးကားဖော်ပြချက်များ ဓလေ့ရိုးရာ ဗဟုသုတ လူမှုဘဝ
November 9, 2018 by padaythar
[Zawgyi] တန်ဆောင်မှုန်း ခေါ် တန်ဆောင်မုန်းသည် မြန်မာပြက္ခဒိန်၏ ရှစ်လမြောက်လသည် အောက်တိုဘာလ၊ နိုဝင်ဘာလ အတွင်း ကျရောက်သည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ၃၀ ရက်ရှိသည်။ ရက်စုံသောလဖြစ်သည်။ ‘တန်ဆောင်’ မှာ ‘မီးတိုင်’ ဖြစ်ပြီး ‘မှုန်း’ မှာ ‘ပျံနှံ့စေခြင်း’ အဓိပ္ပာယ်ရပြီး ထိုဝေါဟာရနှစ်ခု ပေါင်းလိုက်လျှင်
အကြိုက်ဆုံး ကိုးကားချက်လေးတွေကို ပဒေသာပရိသတ်ကြီးအတွက် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရင်းနဲ့ အတွေးလေးတွေကိုယ်စီ ရရှိကြပါစေ။ The Padaythar The Padaythar